Guddiga doorashooyinka Puntland oo ku dhawaaqay liiska 17 urur siyaasadeed oo isdiiwaangeliyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGuddiga doorashooyinka Puntland oo ku dhawaaqay liiska 17 urur siyaasadeed oo isdiiwaangeliyay
March 19, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Bare oo ka hadlaya shir jaraa’id. [Isha Sawirka: TPEC]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah Garoowe kaga dhawaaqay liiska 17 urur siyaasadeed kuwaasoo isdiiwaangeliyay saddexdii bilood ee la soo dhaafay.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Bare oo shir jaraaid ku qabtay xafiiska guddiga ayaa sheegay in 17 urur siyaasadeed ay soo gudbisteen codsigooda tan iyo bartamihii December 2019.
Ururada ay weli ka dhimanyihiin buuxinta shuruudaha wareega kowaad ayaa loo qabtay ilaa 22 bishaan Maarso, 2020, halka kuwa kale ee shuruudaha wareega kowaad buuxiyay loo qabtay in shuruudaha wareega labaad ay buuxiyaan kahor April, 2020.
Magacyada ururada hoos ka akhriso.
Puntland oo soo dhaweysay baaqa aqalka sare ee ah in la qabto shir wadatashi oo u dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa soo dhaweysay baaqa guddoomiyaha aqalka sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ah in la qabto shir wadatashi oo u dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada [...]
Diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo qaaday duqaymo ka dhan ah maleeshiyada ISIS ee ku sugan Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa qaaday duqaymo ka dhan ah maleeshiyada ISIS ee ku sugan gudaha Puntland shalay oo Jimce ahayd, Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa xaqiijiyay. “Iyadoo lala kaashanayo Dowladda Federaalka Soomaaliya, ciidamada [...]